Kunetseka muWhatsApp kwaizokutendera kuti uone waunotaura naye | IPhone nhau
Kunetseka muWhatsApp kwaizokutendera kuti uone waunotaura naye
Ndizvozvo, WhatsApp, iyo yekutaurirana kunyorera nenhamba hombe yevashandisi, iri mukutarisa mushure mekuwana imwe nyowani ngozi iyo yaizovhura nzira kune yechitatu mapato munhaurirano yedu yakavanzika, kune iyo inowedzerwa kune iyo yatove kuzivikanwa mu Deleting mameseji.
Sezvo isu tichinyatso kuziva, kana kumwe kusangana kana isu pachedu kwakabatana, meseji «online«. Sezvineiwo, pese patinosiya (patsanura) uye zvakare kupinda (batanidza) kuverenga kana kupindura meseji, inonyorwa uye izvi ndizvo zvakashandiswa shora hurukuro kubva kune vamwe vanhu.
Maitiro aya atinodzora nguva idzo vashandisi vanobatana uye nekudzima kubva pachishandiswa iri kubvumidza, neruzivo rwunodiwa, kunyatsoongorora zvakavanzika zvavo, uyezve, isu pachedu. Kunyanya, iyo nguva dzinopfuura kubva patinoenda kunorara kusvika patinozomuka zuva rinotevera ndidzo "dzinokwezva" kune vanodheerera ava.
Hazvina mhosva kuti zvakadii zvinotaurwa uye kuvimbiswa, mukana wekuve pamberi pemunhu, saka tinokurudzira kuti zvisatombochengetwa hurukuro dzepedyo kana ine data rakanyatsojeka, nekuti kana tichizosekwa, tinenge tichirerutsa ruzivo rune njodzi mumaoko evanhu vari kunze kwekukurukurirana.
Uku kunetsekana kunoshungurudza, tichifunga munzvimbo yekutanga iyo nhamba yevashandisi izvo zvainazvo uye chechipiri, nekuti gore rimwe chete rapfuura, kushaya simba kumwe chete kwakaitika nehurukuro ye Facebook Messenger. Maviri ekunyorera anofambisa vashandisi vazhinji ndeaya ari mumuchinjikwa wevano stalkers kana vangori vanhu vanogona kutikonzera matambudziko makuru.
Ndokusaka vashoma uye vazhinji vashandisi vari kusarudza siya WhatsApp y shandisa Teregiramu yezvekukurukurirana kwako, sezvo ichi chiri chekushandisa mameseji chakanyatso fanana neicho chakambotaurwa asi chine chikuru kuchengeteka uye kuvanzika mukutaura kwedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone nhau » Kunetseka muWhatsApp kwaizokutendera kuti uone waunotaura naye
Amai vatsvene, ndakaverenga nekuverenga uye handikwanise kuwana mhosva iyoyo .. kusimuka kwavakaita zvakanyanya kunyora izvi
Twitterrific 5 yave kuwanikwa paMac App Store
Izvo hazvina kukodzera kuisa mari ingangoita € 80 mukutengesa nekukurumidza kweiyo iPhone 8